मंगल थापाको एकरातमै फेरिएको मन, यस्तो रहेछ कारण ! « Ok Janata Newsportal
मंगल थापाको एकरातमै फेरिएको मन, यस्तो रहेछ कारण !
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमा होस् या मिडियामा चर्चित अनुहार हो मंगल थापा । युवापुस्तामा राजनीतिक रंग बोकेका थापा गाली र तालीलाई सहन सक्ने क्षमता राख्छन् । उनलाई सामाजिक सञ्जालमा दुईअर्थी रुपमा हेर्ने गरिन्छ । उनका आलोचकहरुले थापाको खिसीट्याउरी गर्छन् भने प्रशंसकले हौसला प्रदान गर्छन् ।
सुदूरपश्चिमको बझाङमा जन्मेर संघको राजधानी काठमाडौंमा व्यवस्थित बन्न थापाले गरेका संघर्षका पाना निकै भरिएका छन् । बाहिरी आवरणमा थापालाई जसरी मानिसले बुझेका छन् त्यो पक्कै होइन । उनमा युवापुस्ताको छनक देखिनु स्वभाविक पनि हो । किनकी उनी अहिले युवा छन् । स्नाकोत्तर सकेर एमफिलको तयारी गरिरहेका मंगल थापालाई जसरी सामाजिक सञ्जालमा प्रहार हुन्छ, त्यसैगरी उनको कद पनि बढ्दै गएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको राजनीतिमा होमिएका थापा पार्टी विभाजनपछि केही विवादित बने । पार्टीको राजनीतिमा दुई तीन दशक बिताएकालाई सकस परेको समयमा मंगल थापाले पनि एक्कासी सही निर्णय गर्न नसक्नु स्वभाविक हो । लामो समयदेखि राजीनितिका निर्णायक बामदेव गौतम समेत अनिर्णित बनेको समयमा थापाजस्ता युवापुस्ता केही समय अनिर्णित बन्न सुहाउँछ ।
नेकपा वैधानिक तवरले फुटिसकेको छैन । सांगठानिक र व्यावहारिक रुपमा भने तीन ठाउँमा विभाजित छ । अहिले नेकपा पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल पक्ष, केपी शर्मा ओली पक्ष र बामदेव गौतम पक्षमा विभाजित छ । दाहाल–नेपाल समूहमा नेकपाको बहुमत देखिएको छ । ४४६ केन्द्रीय कमिटी सदस्यमध्ये ३१५ भन्दा बढी दाहाल–नेपालसँग छन् । बाँकी ओली पक्ष र बामदेवसँग मिसिएका छन् भने केहीले अझै निर्णय गर्न सकेका छैनन् ।
पार्टी विभाजनपछि मंगल थापाजस्ता धेरै युवालाई यस्तै सकस परेको छ । धेरैले निर्णय लिन सकेका छैनन् । ओली पक्ष सत्तासीन भएका कारण केही युवापंक्ति त्यतातिर छ तर, धेरैजसो शक्ति दाहाल–नेपालमै छ । थापा पनि पार्टी विभाजनको शुरुमा ओली पक्षमा उभिएका थिए । उनलाई ओली पक्षबाट अनेरास्ववियूको केन्द्रीय सदस्य समेत मनोनित गरिएको थियो । केही समय उनले ओली पक्षको बचाउ पनि गरे । तर, पछिल्लो समय कम्युनिष्टको दुईतिहाइ बढी समूह दाहाल–नेपाल पक्षमा र निश्चित भिजनसहित व्यवस्था रक्षार्थ लागेका नेताहरुको गोलबन्ध देखेपछि थापालाई नेपाल पक्षतर्फ तानेको हो ।
ओकेजनताको प्रश्नमा थापा भन्छन्, ‘गल्ती सबैबाट हुन्छ, शुरुमा निर्णय लिन समस्या भयो र दबाब पनि आयो पछि बुझ्दै जाँदा मैले त कम्युनिष्टको बाटो बिराउन पुगेछु, फर्किए ।’ थापाले अरु युवा पंक्तिलाई पनि दाहाल–नेपाल पक्षमा फर्किन आग्रह गरेका छन् । थापाले भनेका छन्, ‘अग्रपंक्तिमा बढेको मोर्चा ब्याक हुन सक्दैन, पश्चगमन तर्फको यात्रा भने अध्याँरो सुरुङभित्रको यात्रा हो जतिबेला पनि भाँसिन सक्छ ।’